Iindlela ezi-5 zokomeleza inkqubo ngaphandle kokubeka esichengeni uBuchule boBuchule | Martech Zone
Abathengisi kunye nobuchule bokufumana ubuchule obuncinci xa incoko yenkqubo isiza. Oku akufanele kusimangalise. Emva kwayo yonke loo nto, sibaqeshela amandla abo okuba yintsusa, intelekelelo, kwaye ingaqhelekanga. Sifuna ukuba bacinge ngokukhululekileyo, basisuse kwindlela ebetyiweyo, kwaye bakhe uphawu olutsha olubonakalayo kwindawo yentengiso enabantu abaninzi.
Asinakho emva koko ukujika silindele ukuba ubuchule bethu buya kuba lolwakheke kakhulu, lwenkqubo ejolise kubalandeli nabangakwaziyo ukulinda ukuhlalutya imeko yokuhamba kakuhle kokusebenza.
Kodwa nabona bantu bakhululekileyo phakathi kwethu kufuneka bavume ukuba xa iinkqubo zibuthathaka okanye zisilela, isiphithiphithi siyalawula, kwaye oko akulunganga kwimveliso yoyilo.
Kwilizwe apho umndilili wolwazi achitha khona Iipesenti ezingama-57 zexesha labo on yonke into ngaphandle umsebenzi ababeqeshwe ukuba bawenze, ukubeka uhlobo olufanelekileyo lolwakhiwo endaweni kubaluleke ngakumbi kunangaphambili. Yiyo kuphela indlela yokugcina i-pandemonium ibekhona kwaye yenza ukuba wonke umntu enze owona msebenzi mhle.
Nazi iindlela ezintlanu zokomeleza iinkqubo ukuze uphinde ufumane ixesha lokufumana umvuzo, umsebenzi wokuyila ohambelana neyona njongo iphambili yeshishini.
1. Yibani Nobubi Ngayo
Ndingumlandeli omkhulu wendlela kaKelsey Brogan "yenkqubo yokunyenya". Njengomlawuli wolawulo lwenkqubo emanyanisiweyo e T-Mobile, U-Kelsey uyakuthanda ukubonisa abantu ukuba ukuhamba komsebenzi okwakhiwe akunyanzelekanga ukuba kubethe.
Uninzi lwabantu alulithandi igama elithi 'inkqubo'- okanye umbono-kuba becinga ukuba lilukhuni kakhulu. Ayisiyonto yokwenza imida ethintelayo ukugcina abantu kwiindlela zabo. Imalunga nokwazi ukuba ziphi na izinto, apho izinto kufuneka zibekhona, zilungele phi. Imalunga nokubeka kuluhlu zonke izinto kunye nokubeka kwindawo apho wonke umntu anokufikelela kuyo.
UKelsey Brogan, uMlawuli weNkqubo eDibeneyo yoLawulo kwiT-Mobile
Kodwa akathembeli kumandla akhe okweyisela okanye abhenele kwimiyalelo ephezulu yokufumana amaqela ebhodini. Endaweni yoko, unceda iqela elinye litshintshe ngexesha, kwaye emva koko avumele izibonelelo ezibonakalayo zeenkqubo ezinamandla ukuzithethela. Nje ukuba amaqela akufutshane awubone umahluko wolawulo lweshishini, baqala ngokukhawuleza ukukhwaza ukuba babe yinxalenye yabo. Indlela kaKelsey bubungqina bokuba xa utshintsho lulawulwa ngempumelelo, luyanda kwaye lubanzi ngokwendalo.
2. Sebenzisa iitemplate kuMsebenzi oPhinda phinda
Iindidi zoyilo zihlala zingathandi ukuphindaphinda, umsebenzi ongenangqondo kuninzi. Bakhulule ekukhathazekeni ngokusebenzisa iitemplate naphi na apho kunengqondo. Sebenzisa itekhnoloji yolawulo lomsebenzi weshishini ukuphuhlisa uluhlu olupheleleyo lomsebenzi kwiindidi ezahlukeneyo zeprojekthi, unikezele ngokuzenzekelayo indima yemisebenzi kwimisebenzi, kwaye uqikelele ixesha kunye neeyure ezicwangcisiweyo zokwenza umsebenzi ngamnye. Oku kubaluleke kakhulu kwenza ukuba zonke iinkqubo zentlungu zingabonakali kwizinto zakho zokuyila.
Abathengisi banokungena nje kwaye bawubone ngoko nangoko umsebenzi ababelwe wona ngokukodwa. Kwaye abaphathi bokuyila banokusebenzisa izixhobo ezakhelweyo ngaphakathi ekucwangciseni izixhobo ukulandelela ukubakho komntu wonke, kunokuba benze uqikelelo olufundisiweyo okanye bathumele ii-imeyile ezininzi ukufumana ukuba ngubani onalo ixesha lantoni.
3. Yithi Goodbye to Sticky Notes
Into elula njengokuhambisa iiprothokholi zakho zokungenisa, ezibeka inqanaba kuyo yonke iprojekthi, inokwenza umahluko omkhulu kwinkqubo yakho yoyilo iphela. Qala ngokuqinisekisa ukuba zonke izicelo zomsebenzi zingeniswa ngendlela efanayo-kwaye hayi nge-imeyile, inqaku elincangathi, okanye umyalezo wangoko nangoko. Unokuseta ifom kaGoogle ezalisa ngokuzenzekelayo ispredishithi esembindini okanye, nangcono, uthathe ithuba lokusebenza kwesicelo somsebenzi kwiqonga lakho lolawulo lomsebenzi.
4. Thatha iintlungu ngaphandle kokungqina
Ukuba ubunokukhetha icandelo elinye lenkqubo yokuyila ukomeleza kunye nokuhlengahlengisa, ubungqina yeyona nto inokwenzeka ukuba iphumelele iintliziyo neengqondo zeqela lakho lokuyila. Ngobuchwephesha bokubonisa ubungqina bedijithali, ungashenxisa imixokelelwano ye-imeyile engavakaliyo, ingxelo ephikisanayo, kunye nokudideka kwinguqulelo. Abadali kunye nabaphathi bezithuthi banokubona ngokulula ukuba ngubani ophendulileyo kwaye ngubani ongaphendulanga, ukunciphisa kakhulu isidingo sokugxotha abachaphazelekayo okanye ukucela ingxelo.
Amanqaku ebhonasi, yongeza ulawulo lweeasethi zedijithali (DAM) kwisuti yakho yezixhobo. Bonke abathengisi bayakuxabisa ukufikelela kwangoko kwiinguqulelo zamva nje zeeasethi ezivunyiweyo, abanokuthi baphinde bakwenze ubungakanani kwakhona kwaye bazithumele ngaphandle kwiifomathi abazifunayo, ngaphandle kokuya kugcino lomzobi wesango. Khawufane ucinge ukujongeka kobuso babaqulunqi bakho xa besiva ukuba ngekhe baphinde bathumele i-imeyile kumbala omnyama nomhlophe we logo yenkampani kwakhona.
5. Mema Igalelo lomntu wonke
Nanini na xa usenza utshintsho kwiinkqubo esele zikhona-nokuba wenza inguqu epheleleyo yedijithali okanye uzalisekisa uhlaziyo lokuhamba komsebenzi ekujoliswe kuko-mema igalelo kwabo bazakuva ifuthe lolona tshintsho. Ngelixa uya kuba nomphathi wenkqubo okanye ingcali kulawulo lweprojekthi esenza umsebenzi wokuphicotha ukuhamba komsebenzi, ukubhala amanyathelo, kunye nokwakha iitemplate, qiniseka ukuba izidalo ekulindeleke ukuba zithobele inkqubo ziyabandakanyeka kuwo onke amanyathelo yendlela.
Nika iNkqubo ithuba
Uvile i-adage endala ukuba uyilo olulungileyo kufuneka lungabonakali. Iinkqubo zomsebenzi kufuneka zisebenze ngendlela efanayo. Xa besebenza kakuhle, akufuneki ubaqaphele. Akufanele bazive bephazamisa okanye bephazamisa okanye bedinisa. Kuya kufuneka bathi cwaka, ngokungabonakaliyo baxhase umsebenzi ekufuneka wenziwe.
Kwaye kwenzeka into ehlekisayo xa iintlobo zokuyila zinamava omsebenzi ngale ndlela-ukuxhathisa kwabo ekuthetheni ngesakhiwo kunye nokuhamba komsebenzi konke kodwa kuyanyamalala. Bakhawuleza baqonde ukuba iinkqubo zedijithali eziyilwe kakuhle zenza ngaphezulu kokuzikhulula emsebenzini oxakekileyo nakwimisebenzi ephindaphindwayo. Banikwa amandla okuhambisa umsebenzi osemgangathweni ophezulu ngokukhawuleza nangokungaguquguqukiyo, ukubuyisa ixesha lokuyila kunye nokuyila, kunye nokuchitha usuku ngalunye besenza umsebenzi ababeqeshelwe ukuwenza.
tags: inkqubo yoyiloidamauyilo lwentsebenziswanoitemplate yoyiloubungqina bedijithaliU-kelsey broganamanqaku ancangathit-iselfowuni
UHeidi ligosa eliyintloko lokuthengisa Indawo yomsebenzi. UHeidi ngamandla aphezulu, inkokheli yesigqeba esiphakamileyo esijolise kwiziphumo kunye nomcebisi ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yamava ekuphuhliseni nasekwenzeni iindlela zokuthengisa kunye nezentengiso eziqhuba ukukhula.